China Iyo Platform Package fekitori uye vagadziri | Jitai
Mapakeji anoumbwa nemuchina wekutsikirira papuratifomu mapakeji, ine hunyanzvi hwepamusoro hwakakodzera kugadzirwa kwakawanda.Mhando dziri kutungamira kubva pachigamba nePulagi-In inowanzo kuratidzwa DIP kana Quad Inline yakakodzera gungano rePlag-In. Yakabatanidzwa Dunhu redunhu.
* Inotungamira inotora kovar zvinhu, mapakeji anotora kovar, 4J42 kana CRS1010 zvinhu, zvine hunyanzvi hwepamusoro.
* Muvharo inotora pombi yekutenderera, tini yekunamatira kana laser welding.
Mabhokisi anotungamira anofanirwa kusarudza cyclinder kana nailhead pini pane zvinodiwa nevatengi.
* Kurongeka kwemitungamiriri kunowanzo gamuchira DIP kana Quad Inline inogona kugadzira pane zvinodiwa nevatengi.
* Iyo pini yepasi yepakeji inotemwa nemutengi.
* Dhizaini yekepisi inofanirwa kukodzera pasuru pane pasuru dhizaini.
* Mutengi anofanira kusarudza pasuru yakazara yakanamirwa pamubhedha Au kana inotungamira inosarudzika yakanamirwa pamhepo Au.
* Zvese indexes zvinofanirwa kusangana nezvinodiwa zveGJB548B.
1. Mabhesi ari 4J29 FeNiCo alloy kana CRS1010, kuumbwa uye chivakwa che4J29 chinofanira kusangana ne GBn97-1987 standard, CRS1010 kuumbwa uye chivakwa chinofanira kusangana GB / T699-1999
2.Pini dziri 4J29 FeNiCo chiwanikwa kana 4J50、4J50 mhangura cored chiwanikwa, kuumbwa uye pfuma
ye4J29 inofanira kusangana ne GBn97-1987 yakajairwa, kuumbwa uye chivakwa che4J50 chinofanira kusangana
3.Glass insulators ari BH akateedzana, DM-305 kana Elan # 13. Kuumbwa uye chivakwa cheBH nhevedzano
Inofanirwa kusangana nehunyanzvi dhata rehuwandu hweBH dzakateedzana muNeG kambani, kuumbwa uye chivakwa che
DM-305 inofanirwa kusangana neSJ / T10587.1-97 chinodiwa.
4.Cap ndeye 4J42 FeNi alloy, kuumbwa kwayo uye chivakwa zvinofanirwa kusangana neGGn103-1987 standard.
5.Braze ndeye HlAgCu28, kuumbwa kwayo uye chivakwa zvinofanirwa kusangana neGG / T10046-2008 standard.
6.Specific musimboti wekuisa chisimbiso ona sezasi:
4J29 Tambo Yemhangura
4J50 Mhangura Yakaumbwa
Oxgyen Yemahara Mhangura Zirconium mhangura
Elan13 # (Girini)
Chikamu Chechitatu: Range dhizaini yezvidimbu zvepakeji
Iko kune huwandu hwedhizaini yePulagi-In Sidewall Metal mukambani yedu parizvino ona pazasi:
Maitiro Maitiro Zvinyorwa zvePakeji Outline Of Pasuru Rakaumbwa Of Package Kudzika KwePakeji Simbiso ukobvu
Mumwe-Piece CNC azvikuya
Chikamu chechina Chikamu chegadziriro yemamodhi
1.Iyo sarudzo yezvinhu zvemamodhi
Nekuda kweiyo graphite modhi yakanyanya kupisa tembiricha, yakaderera kudziya kupisa uye kana kunyudza girazi
kana simbi, iri nyore kugadzirisa, yayo yakachena graphite inosarudzwa seyemhando yezvinhu.
2.Iyo sarudzo yemamiriro e graphite
Iwo akateedzana epuratifomu yesimbi pasuru kunyanya ine reverse sintering kumwe kuumbwa, inogona kuchinjika kushandiswa maererano nehunhu hwayo masisitimu.
3.Iyo nheyo yekugadzira ye reverse mode
Kudzoreredza sintering kunofanira kuvimbisa kusangana kwehurefu hwekubatanidza pamusoro pechipini chemukati, kunyanya kunoshandisa
igwa rese richiita sintering.
Kusarudzwa kwezvinhu zvekuvhara
Paralle rakavhara Welding ： 4J42
Laser Welding: 4J42,4J29, CRS1010; Stainless Simbi, Alsi
Screw Kuisa: 4J42,4J29, CRS1010, Stainless Simbi, Aluminium chiwanikwa
Dhizaini yedhiimendi yechimiro
3.1: Mumwe-chidimbu cnc azvikuya mamiriro
3.2: Chimwe-chidimbu chakadzama dhizaini
3.3Miviri yakaparadzaniswa inosimbisa chimiro
Iko kune imwechete-chidimbu base uye yakashongedzwa zvivakwa zvivakwa, ingangoita yekushandura zvinhu zvechigadziko kuCu, WuCu, Dimanond braze uye nezvimwe zvinhu kuwedzera zvakanyanya kupisa kwekupisa kwepakeji.
Nheyo yezvikamu zvezvikamu.
Flat package inotora lead ine chimiro che cyclinder, rectangle, yakatsetseka, yakakotama.
Chikamu cheyakapetwa simbi inotungamira
Iyo rectangle inotungamira makemikari etching inotungamira neyakajairwa muchinjikwa scetion0.3mm * 0.4mm
Iyo inogadziriswa nekunyengedza iyo cyclinder yakatwasuka nzira.
Zvinoenderana nechimiro chekukombama, yakakomberedzwa inotungamirwa yakakamurwa kuita rectangle yakakombama, Z chimiro yakakombama.Kuenderana nechikamu chemuchinjikwa chinotungamira, yakakomberedzwa inotungamira zvakare yakakamurwa kuita cyclinder yakakotama, rectangle yakakombama Dzimwe nguva isu taigona kugadzira yakakombama yakatetepa inotungamira pane yega vatengi zvinodiwa zvekushandisa .
Iyo dhizaini yemapuratifuru epakeji ndeye Z chimiro yakakomberedzwa inotungamira, inotungamira inogona kusarudza cyclinder kana rectangle inotungamira ine diameter≤0.8mm (dhayamita ＞ 0.8mm, haigone kuve yakakombama nemakona maviri).
Iyo dhizaini yemagetsi edzimba inowanzo rectangle yakakomberedzwa inotungamira, uye zvinotungamira ndeye cyclinder.
Pashure: Flat Metal Pasuru
Zvadaro: Zvemagetsi Connector Zvikamu
Inogona-Platform Yesimbi Package
Plug-In Platform Yesimbi Package